Mandraisa anjara - BullyingCanada
Fahalalahan-tanana tsy voafehy
avy amin'ny olona toa anao
vonjeo ny aina. Omeo hoavy mamiratra ny ankizy ampijaliana Donate Now Aoka ho ny fahasamihafana lehibe
amin'ny fandresena fampiononana
ho an'ny ankizy ampijaliana. Ampiharo anio Aoka ho Fiainana Miaraka Amin'ny BullyingCanada Lasa mpisolovava
ho an'ny ankizy ampijalian'i Canada. Miasa mivantana amin'ireo ankizy tratry ny trauma tsy ho anao?
BullyingCanada dia mila mpilatsaka an-tsitrapo hanampy amin'ny asa maro any aoriana. Join BullyingCanada Mandraisa anjara anio
Avereno ny fahasambarana ho an'ny Tanora Kanadiana nampijaliana
Ankizy ao anatin'ny krizy, manerana ny firenena, miantehitra BullyingCanada isan'ora isan'andro.
Manantena ny ankizy tra-boina
Azonao atao ny mitondra fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny ankizy ampijaliana sy ny fianakaviany amin'ny rariny $ 21 isam-bolana
Arakaraka ny ela ampahoriana ny zaza iray no vao mainka hitera-pahavoazana ara-batana, ara-pihetseham-po ary ara-tsaina izay mety haharitra mandritra ny androm-piainany. Mety hanimba ny fahatokisan-tena ny fampijaliana, ka mahatonga ny ankizy hisintona sy tsy hatoky tena — miaraka amin'ny fanafihan-tahotra, aretim-bavony ary nofy ratsy. Tsy afaka mifantoka any an-tsekoly izy ireo, ka miteraka naoty ratsy izay mety hampihena ny fahafahany ho avy. Rehefa tsy mitsahatra ny fampijaliana, dia mety hitarika ny ankizy hanala ny ainy ny fahaketrahana sy ny adin-tsaina.
Mila herim-po lehibe izany ho an'ny ankizy mba hanatona anay amin'ny fanampiana. Ny fahalalahanao ahafahantsika miantoka fa mamaly ny antso vonjy rehetra. Isaky ny ora. Isan'andro.
BullyingCanada Mamonjy Aina
Manolotra hetsika avy hatrany, feno fangorahana hanohanana ireo tanora ampijaliana, BullyingCanada manana programa sy serivisy isan-karazany hiadiana amin'ny fampijaliana manerana ny firenena.
tanora nanompo tamin'ny 2020
taona nanompoany feno fitiavana BullyingCanada misarika ny hanompo ny ankizy marefo
Hitety ny BullyingCanada Difference
BullyingCanada dia fantatra eran'izao tontolo izao noho ny fomba fiasany tsy manam-paharoa amin'ny fanampiana ireo ankizy ampijaliana hampitsahatra ny ratram-pony. Mianara bebe kokoa momba ny BullyingCanada sy ny ezaka ataony androany:
Mba manome izao
Tohano ny Bullying Canada Today
Tanora an'aliny manerana an'i Kanada no mahazo fanampiana lehibe avy amintsika isan-taona-an-tapitrisany hafa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao miantehitra BullyingCanada loharanon-karena hanampy amin'ny toe-javatra misy azy ireo.
Azafady mba ho azo antoka voavaly ny antso rehetra amin'ny fanaovana fanomezana malala-tanana sy azo ahena hetra.
Ampio hanome hoavy mamiratra ny ankizy ampijaliana.
Diniho ny fahafahana anio